Iincwadi ezisixhenxe malunga noJulius Caesar kwisikhumbuzo sokuzalwa kwakhe Uncwadi lwangoku
Iincwadi ezisi-7 malunga noJulius Caesar kwisikhumbuzo sokuzalwa kwakhe
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | I-Biography, IiComics, Iincwadi, Inoveli, Ithiyetha
Umlingisi waseIreland uCiarán Hinds njengoJulius Caesar kumdlalo kamabonwakude eRoma, ukusuka kwi-HBO. Eli binzana livela kuJulius Caesar kaWilliam Shakespeare.
UJulius Caesar wabona ukukhanya ngaphakathi eRoma el NgoJulayi 13, 100 phambi kukaKrestu (ngokomhla owamkelekileyo), ke isikhumbuzo sokuzalwa kwakhe Inye wabalinganiswa abakhulu kwimbali yoluntu kwaye sonke sifunde, sabona kwaye seva okuthile ngayo. Kwaye ngethamsanqa singamfunda.
Ngubani ofunde la baccalaureate ye iileta ezimsulwa safunda iingcamango zokuqala zesiLatini ngaloo nto IGallia is omnis divisa kwiindawo ezintathu, Ukusuka kweyakhe YeGalico entle, la Imfazwe yegalikhi. Kwaye uninzi lwabantwana luya kufunda ukufunda kunye nokuzonwabisa kunye nokungahambi kakuhle kukaJulio ohluphekileyo kunye nalawo maGauls angenakuphikiswa e-Asterix ne-Obelix. Kodwa masiqwalasele ezi ncwadi zisi-7 yemibhalo emininzi ngaye njengophawu oluphambili kunye umntu wembali okanye njengoko umlinganiswa Iinoveli nemidlalo.
Masiqale ngezona zakudala.
1 Ubomi obufanayo- iPlutarch
2 Ubomi bobuthixo buka-Julius Caesar - Suetonius
3 UJulius Caesar - uWilliam Shakespeare
4 Yeka. I-Biography echaziweyo-Adrian Goldsworthy
5 Apho iinduli zibhomboloza-uFrancisco Narla
6 UKesare-Colleen McCullough
7 UJulius Caesar kunye neMfazwe yeGallic - u-Anne-Marie Zarka
Ubomi obufanayo - iPlutarch
Las Imbali yamabali Lo mqulu uyinxalenye yomsebenzi walo mbhali-mbali waseGrisi kunye nefilosofi apho ahlonipha khona iGrisi neRoma. Yiyo loo nto ithelekiswa uphawu olukhulu lwesiGrike nolunye uRoma. UPlutarco ubalisa obu bomi ukususela ebuntwaneni kunye noqeqesho de kwasekufeni kwakhe. Ukwabhala idatha yeembali ngokuzoba imbonakalo yengqondo yabalinganiswa abagcina injongo yokuziphatha.
Ubomi bukaThixo Julius Caesar - ISuetonium
Umbhali-mbali ISuetonio Tranquilo Isitshixo (c. 69-140 AD) wazalwa xa ubukhosi baseFlavian bangena emandleni. Wayesebenza eRoma phantse bonke ubomi bakhe kwaye wayekhonza umlawuli UTrajan. Emva kwexesha, kwaye njengonobhala ngexesha lika Adriano, ikwazile ukufikelela koovimba basebukhosini. Kuzo kwafunyanwa Imbalelwano phakathi kukaKesare no-Octavio Augusto, izinto awayezisebenzisela eyakhe Ubomi beeKesare ezilishumi elinambini, owona msebenzi wakhe waziwayo.
Oku eyokuqala kwezi ncwadi zisibhozo Abenza lo msebenzi, ekubaliswa kuwo iibhayografi ezilishumi elinambini. Suetonius Ndifuna ukwazisa kunye nokonwabisa malunga nokuziphatha komlawuli. Ngelo thoni uyakuxelela ngobomi bukaKesare, ukusuka ngaphambi kokunyuka kwakhe ukuya kufikelela ekufeni kwakhe, edlula kubomi bakhe nakwizithethe zakhe.
UJulius Caesar - William Shakespeare
Yintoni enokuthethwa ngayo omnye wemisebenzi eyaziwa kakhulu Yeyona bard yesiNgesi idumileyo emhlabeni. UShakespeare kufuneka ukuba uyibhalile 1599. Phinda wenze iyelenqe ngokuchasene noMlawuli waseRoma uJulius Caesar, ukubulawa kwakhe kunye neziphumo zoko. Ngomnye wemisebenzi emininzi kaShakespearean esekwe kwiziganeko zembali.. Iinguqulelo zayo ezahlukeneyo kumdlalo bhanyabhanya kunye nakwithiyetha yindawo elungileyo endaweni yelaziest kunye nezakudala, kodwa kubaluleke kakhulu ekufuneka ifundwe.
Yeka. Ingcaciso engembali -Adrian Goldsworthy
Ukufaneleka kwegolide ka-Adrian ngumbhali-mbali wase-Bhritane, ingcali kwi imbali yamandulo yomkhosi. Kule biography toca Zonke iinkalo zobomi bukaCésar, ukusuka kwimpumelelo yakhe yasemkhosini nakwezopolitiko ukuya kwizonahlazo zakhe ezifanelekileyo kunye namabhongo.
Umzobo omkhulu womfanekiso walowo wayesazi indlela yokuvuka ebumnyameni ngokupheleleyo ukuze abe Indoda esisityebi emhlabeni kwaye ibambe amandla Iyakwazi ukuyiphelisa iRiphabhlikhi yaseRoma. Kodwa ekufeni kwakhe uKesare walawula phantse umhlaba wonke owaziwayo kwaye I-charisma ihlala emva kweminyaka engaphezulu kwama-2 000.
Apho iinduli ziyabhomboloza -Francisco Narla
Sele ndicebisile Ngaphezulu kwesinye isihlandlo le ncwadi zibalaseleyo zalo mbhali waseGalician wodumo lweencwadana zakhe zembali. Kwaye ndiyenza kwakhona kuba ukufundwa kwayo kufanelekile kwezi ntsuku zeholide.
Iqela le imikhosi ethembekileyo kuJulius Caesar bazenze njengezilwanyana ezinwabuzelayo kwaye bazinikele kwisizwe sookhokho Galicia ukubulala iingcuka ezichitha imfuyo yazo. Bafuna ukuxelelwa ngendawo yasentsomini imigodi yegolide. Kubo inkosi yaseRoma iya kukhupha isinyithi esixabisekileyo apho iya kungenisa khona kwiNdlu yeeNgwevu. Kodwa nini babulala ingcuka emithiyo, indoda yokugqibela esindayo, Ingcuka enobuqili nenkulu, iya kuwasukela aye eRoma ngokwawo ukuze afune ukuziphindezela kunye nokunciphisa izicwangciso eziyimfihlo zikaJulius Caesar.
Cesar -Colleen McCullough
Nguwo isiphumo sepentalogy zinikezelwe kwiRoma yakudala yoku Umbhali ophumeleleyo wase-Australia, usweleke kwiminyaka emibini edlulileyo. Qalisa ifayile ye- nyaka 54 ukuya. JC kunye noCayo Julio Cesar qhubela phambili kwi IGalia Ukutyumza ookumkani abangamagorha abawela umendo wabo. Ukuphumelela kwakhe egameni laseRoma kuyingqungquthela, kodwa iinkokheli zeRiphabhlikhi zoyika amabhongo abo angenamda kakhulu. Inokuya kude kangakanani eyona ndoda ikrelekrele emkhosini eRoma? Xa uCato kunye neNdlu yeeNgwevu bemngcatsha, uKesare, kumanxweme oMlambo iRubicon, wenza esona sigqibo sibalulekileyo ebomini bakhe: ukujikela kwilizwe lakhe elingenambulelo.
UJulius Caesar kunye no-lukuya kwiMfazwe yeGallic - U-Anne-Marie Zarka
Este incwadi yemifanekiso iphefumlelwe Amagqabantshintshi malunga neMfazwe yeGallic ibhalwe nguJulius Caesar ngokwakhe. Yenzelwe abafundi abaneminyaka ephakathi elineminyaka elishumi elinanye ubudala kwaye sisingeniso esihle kakhulu kwimbali yoBukhosi baseRoma. Isahluko ngasinye siquka midlalo ukuphucula ulwazi kunye nokujonga ibali kunye nesigama. Kukho namaphepha amaxwebhu okucebisa eyakho inkcubeko ngokubanzi nokwazi kwakhe ixesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » I-Biography » Iincwadi ezisi-7 ezingoJulius Caesar ngomhla wokuzalwa kwakhe
Iincwadi ezi-6 ngababhali abavela kwiReal Sitio naseVilla de Aranjuez. Ukuhanjiswa kwe-1.
Namhlanje kuphawula iminyaka engama-200 yokuzalwa kukaThoreau